Kaody Google Analytics momba ny kaonty marobe
Talata, Aprily 5, 2011 Alakamisy, Desambra 1, 2011 Douglas Karr
Matetika dia ilaina ny manara-maso pejy iray amin'ny kaonty Google Analytics maro. Ohatra, mety manana kaonty marobe ianao - ny iray ho an'ny mpanjifa ary ny iray ho an'ny masoivohonao - ary te-hanakodia ireo data ao aminy ianao. Mba hanaovana izany dia mila manana kaonty roa voalaza ao amin'ny pejy tsirairay ianao.
Asa somary mora ity tamin'ny alàlan'ny kaody Urchin (pageTracker) taloha fa ny mahagaga dia mora kokoa noho ny script Google Analytics embed vaovao izay natolotra.
Amin'ny ankapobeny, manampy fotsiny ny kaonty fanampiny amin'ny laharana _gaq ianao! Raha te-hanampy bebe kokoa ianao dia ovao fotsiny ny "b" ho "c" sns, sns. Ataovy ao an-tsaina fa mandatsaka cookies ianao amin'ny kaonty tsirairay ampidirinao, na izany aza, aza variana loatra.
Dec 6, 2011 ao amin'ny 3: PM PM
Toro miavaka! Misaotra nizara Doug! Misy fiatraikany ratsy amin'ny kaody marobe amin'ny tranokala ve raha voalamina tsara? Ankoatra ny fanaparitahana cookies fanampiny manerana ny toerana?
Tsy misy na inona na inona RAHA voalamina tsara. Raha mametaka tenifototra script vitsivitsy fotsiny ianao ao anaty pejy iray, dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny cookies, naoty, ary statistika ankapobeny.
Apr 19, 2013 ao amin'ny 8: PM PM
Toa tsy mandeha amin'ny iray amin'ireo tranokalanay intsony io fampiharana io. Voamarikao ve fa tsy mandeha intsony koa io? Misy hevitra ve ny antony hananany?